In this photo taken March 2, 2013, members of the ZANU-PF youth group, popularly known as Chipangano (meaning the brotherhood in local slang) perform at President Robert Mugabe's 89th birthday celebrations in Bindura, Zimbabwe. Elections in Zimbabwe are still months away, but already President Robert Mugabe's party is intimidating its opponents and threatening violence, human rights and pro-democracy groups say. Witnesses say Mugabe's ZANU-PF party has begun deploying youth militia groups in some of its strongholds. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) | View photo - Yahoo News
Yezidis in Iraq In this photo taken March 2, 2013, members of the ZANU-PF youth group, popularly known as Chipangano (meaning the brotherhood in local slang) perform at President Robert Mugabe's 89th birthday celebrations in Bindura, Zimbabwe. Elections in Zimbabwe are still months away, but already President Robert Mugabe's party is intimidating its opponents and threatening violence, human rights and pro-democracy groups say. Witnesses say Mugabe's ZANU-PF party has begun deploying youth militia groups in some of its strongholds. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)